Madaxweynaha Farmaajo oo ka qeyb galay Shir-Madaxeedka joogtada ah ee 13-aad ee IGAD – Al-Hurriyah
Article Updated:	November 30, 2019
Addis-ababa, Nofeembar 29, 2019 (Al-Hurriyah News): Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qeyb galay Shir-Madaxeedka joogtada ah ee 13-aad ee IGAD ayaa soo dhaweeyey qorshaha dib u habaynta Urur Goboleedka IGAD oo ay isku raaceen Madaxda ka soo qeyb gashay meertadan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo garowsanayd fursadaha horumarineed, iskaashi iyo ganacsi ee muhiimka ka dhigay dib u eegid lagu sameeyey qaab-dhismeedka Ururkan, waxa ay mar kasta u olaleynaysay in IGAD ay noqoto madal ka soo dhalaasha himillada ay ku qabaan shucuubta Gobolku, kana tarjunta dhammaan danaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dowladaha ku mideysan.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u hambalyeeyey Guddoomiyaha cusub ee Urur Goboleedka IGAD Mudane Cabdalla Xamduuk oo ah Raiisul Wasaaraha dalka aan walaalaha nahay ee Suudaan.
Ra’iisul Wasaaraha Suudaan Mudane Cabdalla Xamduuk ayaa waxa uu xubin muhiim ah ka ahaa Guddiga Dhaqaalah Qaranka ee Jamhuuiryadda Federaalka Soomaaliya kahor intii aan loo magacaabin Xilka Ra’iisul Wasaaraha ee dalka Suudaan.
Sidoo kale, Madaxweynhuhu waxa uu soo dhaweeyey magacaabista Xoghaya Guud ee IGAD Mudane Workneh Gebeyehu, waxa uuna adkeeyey in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay si dhaw ula shaqaynayso hoggaankan cusub, si loo gaaro hiigsiga muhiimka ah ee ururkeenna iyo arrimaha hortabinta u leh awood-siinta Gobolka.
Dowladda Soomaaliya waxa ay kaalin mug leh ka qaadatay aas-aaskii Urur Goboleedka IGAD, haatanna shacabka iyo Dowladda Soomaaliyeed waxa ay u taagan yihiin gudashada doorkooda iyo wax la qabsiga dalalka kale ee qeybta ka ah IGAD.
R/wasaaraha Dalka oo qaabilay Danjiraha Jabuuti ee Soomaaliya.
R/wasaaraha Dalka oo qaabilay Danjiraha Jabuuti ee Soomaaliya. Ra’iisul wasaaraha xukuummadda federaalka…
10 NUTRIENTS THAT FIGHT ERECTILE DYSFUNCTION
10 NUTRIENTS THAT FIGHT ERECTILE DYSFUNCTION Erectile dysfunction is a common disease in man.…
Somalia to address impunity for crimes against Journalists
Somalia to address impunity for crimes against Journalists Saturday 02 November 2019 (Alhurriyah News):…
Muqdisho; 31 October, 2019 (Al-Hurriyah News): Golaha wasiirrada ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meel…
Magaalada Muqdisho waxaa maanta kulan ku yeeshay Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Drs Fawsiya Abiikar Nuur iyo Danjiraha Mareyanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto iyo Madaxda Hay’adda Mareykanka u qaabilsan dhanka Horumarka ee loosoo gaabiyo (USAID).…
Maxkamadda Ciidamada oo Xukun ku riday Askari horay dil u geystay
Dable Xogga Dalka Cabdullaahi Cali Cumar ayaa loo heystaa dilka Marxuumad Dhibaay Maleele Maxamed oo ganacsata aheyd, dilkaas oo ka dhacay degmada Wallaweyn ee gobalka Shabeellada Hoose 23 May sanadkan. Eedeysanaha oo muddo baxsad ka ahaa hey’adaha Amniga …
Dowladda Somaaliya Oo Xirtay Xad Beenaadka Ay La wadaagto Gobalka Hiiraan
Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Booliska Hirshabeelle ayaa xiray xuduuda uu Gobolka Hiiraan la wadaago itoobiya kaasi oo mudooyinkaan si xowli ah qaad ugu soo gudbi jiray si sharci daro ah. Waxaana sidoo kale maanta Ciidamada ay howlgallo lagula…